Ongumzekelo kuni amaqhinga ambalwa ukuthatha kakuhle impompo eziphathekayo phantsi - China Qingdao CO-NELE Group
Ongumzekelo kuni amaqhinga ambalwa ukuthatha kakuhle impompo eziphathekayo phantsi
Xa inqawe ilele phantsi, xa ukuthambekela eziyi- pump eziphathekayo mkhulu, lo ikhonkrithi kungena ezantsi ngenxa ubunzima bayo olusezimbizeni ukuthambeka, ebangela isikhewu kubantu umbhobho ogqithisela okanye ebangela eziphathekayo ukuba akacalucalulani ngenxa self-elibaleka, ngaloo ndlela ebangela umbhobho ogqithisela ukuba ivalekile. Ukuze uphephe oku, la manyathelo alandelayo ingahoywa:
1. Xa zokumpompa eziphathekayo phantsi, i-self-ukuhamba ikhonkrithi zinxulumene kakhulu ukuwa kwayo. Amanzi kufuneka ampontshwe phambi zokumpompa eziphathekayo, khangela ukuba amalungu umbhobho ngamnye ukuqinisekisa ukuba imitywino ayinayo amanzi athontsize, uze ukumpompa nodaka ukuya kuthambisa umbhobho kwaye ngexesha elinye iyakhutshwa Lo moya.
2. Xa ukutyekela eziyi- mkhulu kuno-4 ° -7 °, umbhobho oxwesileyo sihambisane ubude izihlandlo ezingaphezu kwe-5 kufuneka zinikwe ekupheleni phambi umbhobho downwardly yakuthobela nethontsi nkqo, kwaye nabazisebenzelayo kumpompoza kule ikhonkrithi ingathintelwa yi uxhathiso frictional.
Qingdao kwimpompo concrete ixabiso truck (4)
3. Xa utyekelo inqawe mkhulu kuno-7 ° -12 °, ukongeza kumbhobho tyaba amaxesha 5 ubude iseti ekupheleni ngaphambili umbhobho ukuthambeka, kwivelufa zeemoto kufuneka zinikwe ekupheleni esisemantla kumbhobho phantsi. Ngexesha lenkqubo lokumpompa, ukuba kukho umngxuma olusezimbizeni ukuthambeka, ivelufa zeemoto kufuneka avulwe kuqala de yombhobho uthambekele uzaliswe eziphathekayo, yaye xa ivelufa zeemoto luyaphuphuma nodaka, ivelifa zeemoto ivalwe yaye zokumpompa eqhelekileyo wenziwa .
4. Umbhobho phantsi umdlalo ngedrophu enkulu kufakwa kwiziko yombhobho nkqo ezantsi ukufaka umbhobho stop elisebenza wayaphula. Faka iibhola isiponji nzima eziliqela okanye iiplagi ukucoca phambi zokumpompa nodaka ukuba siphephe ukulahleka udaka. Banakho ukubamba ubunzima ibumba.
5. Xa kukhawulelwe iimeko site, xa kungekho sithuba saneleyo ukuba amalungiselelo umbhobho tyaba ekupheleni ngaphambili umbhobho phantsi ukuthambeka, lo mbhobho, ngengqiniba okanye umbhobho thunzi zingasetyenziswa endaweni ukwandisa uxhathiso frictional nokuthintela eziphathekayo ukusuka elibaleka kokuhla kwicandelo kumbhobho.
Qingdao kwimpompo concrete ixabiso truck (6)
Noko ke, kungakhathaliseki nokuba kwimpompo eziphathekayo elidityaniswe phezulu okanye ezantsi, ubude ukuguqulwa tyaba imibhobho ezahlukeneyo, xa eziyi- kanye, ngenxa iifom ezahlukeneyo, amanani kunye kwendawo yase imibhobho, umgama lokuhambisa kanye kunye nobude nazo ezahlukeneyo, nto leyo kuyinto elula ukubala. Buyisela i etsobhileyo tube, engqinibeni, ithumbu, phezulu tube nkqo, phantsi tube nkqo, njll ubude tye. Kwangaxeshanye, ixabiso ingxelo tye nayo enxulumene iimpawu eziphathekayo, umbhobho njalo njalo.
Post ixesha: Nov-21-2019